Kuwa la daawan doono: 5 dal oo ku socda wadadii soo kabashada ee COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka » Kuwa la daawan doono: 5 dal oo ku socda wadadii soo kabashada ee COVID-19
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • Wararka Hong Kong • News • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Wararka Jebinta ee Taiwan • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
In ka badan seddex milyan oo kiis oo la xaqiijiyay iyo in ka badan 200,000 oo dhimasho ah oo adduunka ah, waxaa jira calaamado yar oo ka mid ah Covid-19 faafa oo ka gaabinaysa dhibaatadiisa adduunka oo dhan. Kumanaan kun oo qof ayaa maalin walba qaata cudurka, iyadoo Mareykanka, Spain, Talyaaniga, Faransiiska iyo Iiraan ay ka mid yihiin dalalka ugu daran ee uu cudurku ku dhacay. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah wadamada kale waxay umuuqdaan inay ku guuleysteen inay yareeyaan heerka kiisaska cusub hadana waxay umuuqdaan inay kusocdaan wado gaabis ah oo suuragal ah inay adagtahay dhanka soo kabashada. Waa kuwan:
Shiinaha: Shiinaha oo xudun u ah COVID-19 dillaaca, ayaa umuuqda inuu si weyn u xakameeyay gudbinta fayraska. Qiyaastii 89 boqolkiiba bukaannada coronavirus-ka ee Shiinaha ayaa soo kabsaday oo laga saaray isbitaallada, sida ay sheegayaan warbixinnada guddiga caafimaadka qaranka ee dalkaas. Darnaanta iyo baaxadda tallaabooyinka xakamaynta ee ay hirgelisay dawladda Shiinaha ayaa sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid tirada kiisaska maalinlaha ah.
South Korea: Dal kale oo si hufan ugu soo kabtay waa Kuuriyada Koofureed. Moodelkooda 'raadraaca, tijaabinta iyo daaweynta' istaraatijiyaddu waxay gacan ka geysatay isku dheelitirka qalooca 'COVID-19' oo ah qaab ay ku qanacsan yihiin dalal kale oo badan oo reer Galbeed ah. Si ka duwan dalalka ugu badan ee ay dhibaatadu saameysey, Kuuriyada Koonfureed waxay ku tiirsaneyd tijaabinta baahsan iyo raadinta dhijitaalka ah ee kiisaska looga shakisan yahay si loo xakameeyo aafada, halkii lagu soo rogi lahaa xiritaan ama bandow.
Hong Kong: In kasta oo ay u dhowdahay Shiinaha, Hong Kong waxay ku guuleysatay inay xakameyso faafitaanka iyadoo qaaday tallaabooyin looga hortagayo gudbinta gudaha. Maamulka ayaa fuliyay karantiil qasab ah oo 14 maalmood ah oo loogu talagalay cid kasta oo ka timaadda Shiinaha. Waxay sidoo kale si dhakhso leh u dejiyeen xarumo karantiil ah iyo sariiraha cadaadiska xun ee go'doominta saxda ah, iyo fulinta tallaabooyinka kala fogeynta bulshada sida ka shaqeynta guriga, joojinta munaasabadaha dadweynaha iyo xiridda dugsiyada.
Taiwan: Taiwan waxay ku guuleysatay inay si guul leh u xakameyso fayraska, inkasta oo uu ku yaal meel wax yar u jirta 128km (80 mayl) dhul weynaha Shiinaha. Markii wax laga bartay SARS-kii hore ee dilaacay, dowladdu waxay ku dhaqaaqday ficil isla markii erayga uu ku saabsan yahay cudurka oof wareenka ee Wuhan bishii Diseembar 2019. Waxay bilaabeen baaritaanka ballaaran ee dadka safarka ah ee ka socda Wuhan laga soo bilaabo 31 Diseembar, waxay dejiyeen nidaam lagula socdo kuwa naftooda - karantiil, iyo kor u qaadista soo-saarka qalabka caafimaadka ee loogu talagalay isticmaalka guriga bishii Janaayo. Waxay sidoo kale ahaayeen waddankii ugu horreeyay ee mamnuuca duulimaadyada ka yimaada Wuhan, 26 Janaayo. Ka faa'iideysiga xogta weyn ee kormeerka caafimaadka degdegga ah ee dadka iyo sidoo kale nidaamka daryeelka caafimaadka bulshada ee aadka u wanaagsan ee Taiwan ayaa gacan ka geysatey yareynta faafitaanka fayraska.
Australia: In kasta oo go'doominta juquraafi ahaaneed iyo cufnaanta dadka yari ay tahay faa'iidooyin dabiici ah, haddana jawaabta xoogga leh ee dowladda ayaa si dhab ah u horseeday masiibada si fiican gacanta ugu haysa dalka. Australia waxay ahayd mid kamid ah wadamada reer galbeedka ee mamnuucay duulimaadyada Shiinaha 1 Febraayo 2020, go'aankaas oo kahortagay faafitaanka cudurka. Waxay sidoo kale hirgelisay mamnuucid aan xadidneyn oo dhammaan soo-galootiga caalamiga ah 20kii Maarso, taasoo si wax ku ool ah u jareysa gudbinta fayraska ee ka imanaya dibedda, taas oo keentay kiisaska ugu badan ee dalka. Tallaabooyin adag oo lagu kala fogeynayo bulshada sida amarrada guriga lagu joogo ayaa sidoo kale gacan ka geystay hoos u dhigidda gudbinta bulshada. Muhiimad ahaan, mas'uuliyiinta caafimaadku waxay ku sameeyeen baaritaan ballaaran bulshada ee loogu talagalay fayraska meelaha halista sare leh, taasoo keentay mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee qof walba ee baaritaanka cudurada cudurka ee COVID-19 ee adduunka oo u oggolaanaya marinka infekshinka in si weyn loo xakameeyo arrin toddobaadyo halkii bilooyin.
Argentina, Kolombiya, Namibia iyo Peru, waa inay lahaadaan ...